Voanjo miaraka amin'ny voatavo sy chorizo ​​ao amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
legioma75 minitraOlona 4400 kaloria
Ao amin'ny fotoana tsara indrindra hankafizana ny voatavo. Azontsika ampiana amin'ny zava-mahadomelina rehetra izany, ka hampiasaintsika anio hanamboarana lentilety matsiro.
Tsy manadino ny chorizo, izay manintona ihany koa amin'izao vanim-potoanan'ny taona izao. Azonao atao ny mampiasa chorizo ​​vaovao (io no ananan'ny ahy) na kofehina chorizo ​​maina kokoa.
Ny zavatra tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo voanemba ao amin'ny Thermomix dia hoe marina fotsiny izy ireo, mahasosotra ... nefa tsy mila miahiahy be loatra. Ny robot malalantsika dia hiandraikitra ny fampahafantarana antsika rehefa vonona izy ireo.
Ary raha sanatria manana chorizos ambiny ianao dia avelako ho anao ny rohy mankamin'ny fomba fahitanay ny chorizo ​​miaraka amin'ny cider: Chorizo ​​miaraka amin'ny cider amin'ny Thermomix.
1 Voanjo miaraka amin'ny voatavo sy chorizo
Misy lentil manankarena misy tsiron'ny voatavo.
Fotoana fiomanana: 15M
Fotoana manontolo: 1h 15M
Voatavo 135 g
Menaka oliva 40 g
Voatabia voajanahary voafafa 200 h
280 g ny voanio
1 literan'ny rano
Chorizo ​​vaovao 2
Apetrakay ao anaty vera ny tongolo sy ny voatavo. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 8. Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Ampio ny menaka sy ny voatabia, voahitsakitsaka ary apetraka. Izahay dia manao fandaharana 4 minitra, 120º, hafainganana 1.
Ampio ny paprika. Izahay dia manao fandaharana 1 minitra, 120º, hafainganam-pandeha 1.
Isika izao dia manampy ny rano sy ny sira ary ny voanjo. Apetrakay eo amin'ny sarony ny sobika, fa tsy ny goblet. Izahay dia manao fandaharana 30 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Ampio ny chorizo ​​sy ny programa 15 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Avelao izy hiala sasatra mandritra ny 5 minitra ao anaty vera ary aroso.
Fanazavana fanampiny - Chorizo ​​miaraka amin'ny cider amin'ny Thermomix
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Voanjo miaraka amin'ny voatavo sy chorizo
Muffins volomboasary sôkôla